Rakapetwa bonnell chitubu chematuru
Yakamonera muhomwe yematanho
BEED BASE Series
Izvo zvese zvinogadzirwa zvinoenderana neyakaomesesa yepasirese mwero. Zvigadzirwa zvedu zvakawana nyasha kubva kumisika yemukati neyekunze.
Nemakore makumi matatu ane ruzivo mukugadzirwa kwematsutso
80,000 square metres fekitari nzvimbo
1600 square metres China metiresi yekuratidzira horo
Vanopfuura 700 vashandi
Mwedzi unobuda kupfuura 30,000 zvimedu matiresi
100 mamiriyoni emadhora
Iko kukosha kwegore negore kwekambani kunodarika mamiriyoni zana emadhora
Rayson anogona kugadzira hotera chitubu metiresi, orthopedic mubhedha metiresi, homwe chitubu metiresi, bonnell chitubu metiresi, inoenderera chitubu metiresi, memory foam metiresi, latex metiresi mune ingave flat vacuum compressed nzira kana roll yakarongedzwa nzira. Tine anopfuura zana aripo emhando dzesarudzo.
01 - Mutengi kuendesa pfungwa yezvigadzirwa uye zvinodiwa
02 - Evaluation uye magadzirirwo
03 - Market Kukoshesa
04 - Simbisa mhinduro nemutengi
06 - Muenzaniso
07 - Kurongeka kwekuedza / huwandu hwehuwandu
08 - Mhinduro yemusika
09 - Chigadzirwa chimiro kugadzirisa
10 - Ronga kugadzira
11 - kutakura
Kana iwe ukabvunza zvigadzirwa zvedu, iwe uchawana zvisingatarisirwi zvidzikiso, ndapota taura nesu pakarepo.
Izvo zvese zvinogadzirwa zvinoenderana neyakaomesesa yepasirese mwero. Zvigadzirwa zvedu zvakawana nyasha kubva kumisika yemukati neyekunze. Iye zvino vari kutengesa zvakanyanya kunyika dze200.
Pamusoro pe90% yezvigadzirwa zvedu zvematiresi zvinotumirwa kuEurope, Americas, Australia nedzimwe nzvimbo dzepasi. Isu tinopa zvinhu zvematiresi kuSerta, Sealy, Kingkoil, Slumberland uye mamwe mametiresi anozivikanwa epasi rose.
9inch Inotapira Classic Spring Metiresi
Bedroom metiresi gel memory foam pocket spring metiresi
Dormitory metiresi yemudzidzi kana vashandi
Metiresi yekuomarara kwepakati nepamusoro bonnelll chitubu
Queen size memory foam inokwirisa metiresi mubhokisi 8 inch
Foshan Rayson Non Woven Co., Ltd. isangano reSino-US, rakavambwa muna 2007 iro riri muShishan Town, Foshan High-Tech Zone, uye iri padyo nemabhizimusi ane mukurumbira akadai seVolkswagen, Honda Auto neChimei Innolux. Fekitori iyi ingangoita maminetsi makumi mana nemota kubva kuGuangzhou Baiyun International Airport uye Canton Fair Exhibition Hall.
Hofisi yedu yemusoro "JINGXIN" yakatanga kugadzira waya yechitubu yekugadzira metiresi innerpring muna 1989, kusvika zvino, Rayson haisi chete fekitori yematiresi yeChina (30000pcs/mwedzi), asiwo imwe yematiresi makuru innerspring (60,000pcs/mwedzi). ) uye PP isiri yakarukwa machira (1800tons/mwedzi) vagadziri muChina vane vanopfuura 700 vashandi.
Pamusoro pe90% yezvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuEurope, Americas, Australia nedzimwe nzvimbo dzepasi. Isu tinopa zvinhu zvematiresi kuSerta, Sealy, Kingkoil, Slumberland uye mamwe mametiresi anozivikanwa epasi rose. Rayson anogona kugadzira hotera chitubu metiresi, homwe chitubu metiresi, bonnell chitubu metiresi, inoenderera mberi chitubu metiresi, memory foam metiresi, memory foam hybrid metiresi uye latex metiresi nezvimwe.
Rayson China mattress kambani yakave yakabatikana mune ese marudzi ezviitiko zvemagariro, unogona kuwana yedu yakagadziridzwa nhau pano!
COC- Chitupa chekuenderana kune Mattress Zvigadzirwa
Rayson anogona kupa COC conformity chitupa chevatengi vari pakati peAmerica, maodzanyemba kweAmerica neAfrica.
Rayson Mattress Kambani yakashambadza nezve makumi maviri emhando dzematiresi gore rino, tinya nhau dzedu kuti udzidze zvakawanda!
Mattress Training Course Inoitwa Nguva nenguva Pano paRayson
Rayson achabatsira kosi yekudzidzira kune vamiriri vekutengesa nguva nenguva kuitira kupa zvirinani basa revatengi kune vatengi.
Nzira yekurebesa Hupenyu Hurefu hweMetiresi Yako?
Nzira yekuwedzera sei hupenyu hwemetiresi yako? Nhungamiro yekugadzirisa matiresi.
Isu tinozvipira kuvandudza kurara kwako uye tinoda kuve chipangamazano wako wekurara, nekupa vatengi mametiresi ari nani, tinovimba kuti munhu wese anogona kuwana hupenyu huri nani!
WHATSAPP: +86-13536639410 / E-mail:info@raysonchina.com / Munhu Wokuonana: Wendy Rong
Maitiro Atinoita Kusangana Uye Kutsanangura Global